Andrey Arshavin Uhupenyu Nhau Plus Untold Biography Fact
musha ASIAN FOOTBALL STORI Andrey Arshavin Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yebhokisi yebhokisi inonyatsozivikanwa neNickname; 'Shava'. Our Andrey Arshavin Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga
Andrey Sergeyevich Arshavin akazvarwa pa 29 May 1981 muSt. Petersburg naSergey Arshavin (baba) naTatiana Arshavina (amai).
Akapona nengozi ingadai yakamuuraya iye paakarohwa nemotokari semwana. Vabereki vake vakarambana paakanga ari 12, yakanga iri nguva yaaida ivo vose pamwe chete. Kuva nekunamatira naamai vake kwaiva nemigumisiro yaro sezvo amai vake vakanga varombo. Andrey aifanira kurara pasi pechipfupa chakakomberedzwa naamai vake. Akave nechinangwa chake chokuva muteja kubva paudiki.
Nenzira yakanaka, baba vake vakamuyeuka uye vaifanira kuuya vachimubatsira kuti arambe achirota nehope dzake. Yaiva baba vake avo vakamunyengetedza kuti atsvake basa mumutambo mushure mekukundikana kwake kuva mutevedzeri wemutambo wemutambo.
Arshavin akatanga kutamba bhora achiri muduku uye ava nemakore manomwe. Baba vake vakanyoresa mu Smena football academy of Zenit, guta rake rokumusha. Ashavin yakaitwa kuti iongorore zvidzidzo zvakakosha zvikuru apo ichitarisa bhora panguva imwechete. Nemhaka yeizvi, akaenda kuchikoro chiri pedyo pedyo nebhokisi acaademy. Akanga achida kuverenga mabhuku ake uye kutamba bhora panguva imwe chete.
Sezvo nguva ichifambidzana naye achiziva chiitiko chemutambo, rudo rwake rwebhola rukakura asi izvo zvekudzidzisa zvakaderera. Pane imwe nguva, akanga asingachagoni kuisa pfungwa pavanodzidza. Kuregererwa kwake kwevadzidzi kunowanzoita kuti tive nemafambiro akaipa.
Maererano naAndrey "Ndaitadza zvakanyanya kuchikoro. Pandakanga ndiri mukirasi yechipiri, ndakabvarura bhuku rekunyoresa reklasi nekuda kwekuti ndakanga ndisingadi kuenda kumapoka. Ndicho chiitiko ichi chakaita kuti ndidzingwa. "
Aifanira kudzokera kuchikoro kuti abatane neshamwari dzake dzebhola. Aiva mwana muduku uyewo mutungamiri pakati pevanhu vaviri. Pasina nguva akazova hero hero yemusha wekumusha.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Career in Summary
Arshavin akaita chikwata chake mubhizha rebasa muna August 2, 2000. Zvinoshamisa, zvakaitika pavhu reChirungu. Uyu 19 ane makore ane makumi mashanu akashandurwa naVaAndrey Kobelev panguva yeZenit's 3-0 kutonga pamusoro peBradford City muIntertoto Cup.
Uyu wechidiki aifanira kumirira rimwe gore kuti ave nguva dzose muchechi yeSt. Petersburg kutanga kwegumi neimwe. Muzvose, akapedza nguva masere neZenit, achicherechedza zvigaro zve 71 uye achipa 100 kubatsira muzviratidzo zve281 mumakwikwi eRussia uye enyika. Akava gamba revatenzi veSt. Pete, vakamutumidza zita rake "Shava", uye chiratidzo chaicho chechikwata chinobva kuNorthern Capital.
Akatumidzwa kuti Soccer Player yeChishanu muChnumX, asi yaiva Arshavin yemakore maviri akatevera nekambani - apo mudzidzisi wechiDutch Dick Advocaat akatora-iyo yakazova yakabudirira kwazvo.
Kubva pamakore ake ekutanga sevhiringidzi ve FC Barcelona uye haana kumbobvira aramba chokwadi chaanenge achirota chekutamba kechikwata cheCatalan. Yaiva Arsenal akaba mwoyo wake.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu hweMhuri
Akaberekerwa mumhuri inowanzoshanda yemhuri. Baba vake Sergey Arshavin vaitamba semutambo wemauto. Tatiana Arshavina ndiye mai veRussia mutambi wechikwata Andrei Arshavina. Sergey Arshavin akafa nenjere yekushaya mwoyo pazera re40.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Yulia Arshavina akazvarwa musi wa 3 June 1985 (age 32), akanga Andrey Arshavin mudzimai wokutanga. Vakaroora mu2004 uye vakarambana mu2013. Arshavin ane vana vatatu vanaye - Arseniy Arshavin, Artem Arshavin uye mwanasikana Yana Arshavina. Mushure mokunge varambana, Ashavin haana kushaikwa. Zvinosuruvarisa, kwemakore anopfuura matatu, ivo vanenge vasingatauri uye haana kuona vana vake. Yulia haana kumudzivisa kuita saizvozvo. Pane kudaro, yakanga iri Ashavin uyo asina kuita pfuti. Akangotumira mari nezvipo.
Yakaparidzirwa kuti makore emakore 3 mushure mekurambana kwake, Ashavin akasarudza kuroora zvakare. Chisarudzo chake chakauya mushure mokubatanazve nevana vake kubva kumukadzi wake wekare. Akasungira ruzivo pamwe chete nomufaro wake kwenguva refu Alice Catimini. Vavengi vakaroorana munaSeptember 1, 2016 muSaint-Petersburg.
Mhemberero yacho yaipindwa nevanhu vashoma chete, kusanganisira vana kubva kuAchine kuroorana kwekutanga, pamhemberero yevaenzi vaivewo nemwenga uye mukomana muduku akasarudza kuita zvose zvinyararire, pamba. Iyo inozivikanwa zvakare kuti Alice akachinja zita rake, kuva Arshavina.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-A Fashion Fashion Designer
Arshavin zvakare akadzingirira zviiti uye chiito muMafirwo Akarongwa.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-A Political
Mune 2007, akazoita sarudzo semusarudzo weChipatimendi cheMutemo cheSt. Petersburg chePati United Russia. Mutambi wenhabvu akakunda sarudzo, asi akasiya basa rake gare gare.
Yake inonzi yakatumidza zita rake remumusha "Arshavinka" mushure mokunge mutambi wemutambo weArsenal. Izvi zvaive semugumisiro we rudo rwavainayo.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Munyori
Andrey Arshavin munyori, ane mabhuku matatu mukutanga kwake: "Euro-2008. Guus neChechi Yake. The Diary yaAndrey Arshavin "; "Tazviita! Nhau yekukunda kukuru "; uye "Arshavin, kusanganisira imwe inonzi 555 Mibvunzo neMhinduro pamusoro pevakadzi, Mari, Politics uye Football.
Andrey Arshavin Childhood Story Plus Untold Biography Facts-mutsa
Anobatanidzwawo mubasa rekuda. Arshavin akabvuma chikumbiro chacho kuti ave Mumiriri weMaguta eSOS Vana muguta rePushkin pedyo neSt. Petersburg.